Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Boostada martida » Sunta Guryaha ee Khamriga La Qabatimay
Shaki kuma jiro inay lagama maarmaan tahay in laga gudbo balwadda nolosha burburisa oo burburisa dhammaan qorshayaasha. Si kastaba ha ahaatee, mararka qaarkood, aad bay u adag tahay in lala joogo rugta caafimaadka dadka aan la aqoon oo ka fog jawiga qoyska iyo guriga. Nasiib wanaag, waxaa jira barnaamij dhaqancelin, kaas oo isku daraya awoodda taageerada qoyska iyo kaalmada xirfadeed.
Dagaalka ka dhanka ah balwadda, sunta guriga ayaa suurtogal u ah dad badan.
Tan waxaa lagu suurtogeliyey iyada oo loo marayo nidaamyada qamriga guriga ee khamriga oo ay ku jiraan daawooyinka loo qoray iyo la -talinta taleefanka ee khabiirada rugta.
GP -yada, daaweeyayaasha, iyo kalkaaliyayaasha, ayaa la heli karaa 24/7 si ay u bixiyaan hagitaan, hormaris, talo bixin, ama xoogaa taageero ah.
Xulashada khamriga ku sumooba guriga waa suurtogalnimo kaamil ah oo lagula dagaallamo balwadda iyada oo laga fogaanayo inay ka dhacdo nolosha bulshada.
Tilmaamaha Barnaamijka Detox Home
Waxaa lagama maarmaan ah in la tixgeliyo in dhaqancelinta guriga aysan ku habboonayn bukaan kasta. Kahor intaan dhaqancelintu bilaaban, khabiiro waa inay sameeyaan sahan, hubiyaan falanqaynta, iyo qiimeeyaan xaalad guud ahaan.
Kaliya markaa, haddii khubaradu aysan u qeexin balwadda inay tahay mid halis ah, waxaa suurtagal ah in la bixiyo sunta guriga.
Mid ka mid ah rugaha dhaqancelinta ugu fiican ee UK Serenity ( https://www.rehabclinic.org.uk/locations/drug-alcohol-rehab-clinic-london/ ) wuxuu bixiyaa labada nooc ee dhaqancelinta aalkolada - bukaan -jiifka iyo bukaan -socodka (sunta guriga).
Xarumaha Qabatinka Xasilooni -darrada waxay wataan nidaam ka -saarista aalkolada guriga, oo ay ku jirto qaadashada dawooyinka loo qoray iyo la -talinta taleefanka khabiirada rugta.
Ha u malayn in guriga, bukaanku keligiis joogo. Khubarada Serenity, sida GP -yada, daaweeyayaasha, iyo kalkaaliyayaasha, ayaa la heli karaa 24/7 si ay u bixiyaan hagitaan, hormaris, talo bixin, ama xoogaa taageero ah. Intaas waxaa sii dheer, waxay xakameeyaan marxalad kasta oo barnaamijka ah waxayna la socdaan horumarka.
Maxaad U Doortaa Barnaamijka Bukaan -socodka Degganaanshaha
Faa'iidooyinka dib -u -habaynta sunta guriga ee Serenity:
La -talinta telefoonka iyo fadhiyada daaweynta
Qorshayaasha nafaqada iyo cuntada
Helitaanka fasallada sayniska ee khubarada balwadda khamriga ugu fiican
Daawooyinka lagu maareeyo astaamaha bixitaanka
Waxaa intaa dheer, tixgeli in dib u habeynta guriga ay ka jaban tahay daaweynta bukaan -jiifka.
Dabcan, ka -saaridda guriga waxay tilmaamaysaa heer aad u sarreeya madax -bannaanida bukaanka iyo mas'uuliyadda. Haddii ay jiraan wax shaki ah oo ku saabsan damiirkaaga, waa macquul in laga bilaabo dhaqan -celinta bukaan -jiifka ka dibna si tartiib -tartiib ah loogu gudbo daaweynta fog.